Yini Engalungile Ngekhadi Lakho Lebhizinisi? | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 9, 2009 NgoLwesithathu, Septemba 9, 2009 Douglas Karr
Amakhadi ebhizinisi bekulokhu kuwukuzivocavoca okumnandi kimi. Bengihlala ngenza okuhlukile ngamakhadi wami webhizinisi - okokuqala bekungokwami amakhadi wokubhuloga ngesithombe sami, bese amaphakethe we Amanothi we-PostIt, futhi muva nje ikhadi elincane elinomkhiphi ovela eZazzle.
Namuhla bengibuka i-teleseminar ye U-Alex Mandossian ochungechungeni lwemfundo yebhizinisi engibhalisela kuyo futhi waveza ithuba elihle lokuthi ngiyeke ukushibilika ngadlula… amakhadi amabhizinisi amathathu elandelana!
Amanye amaqiniso ngamakhadi ebhizinisi
Iningi labantu alikhumbuli umuntu ababathola kuye.
Iningi limane lilahlwe. Ukhokhele okuthile okungajwayelekile ukuthi kube nembuyiselo yotshalo-mali!
Kulabo bantu abazigcinayo, bambalwa kakhulu abake bathathelwa izinyathelo… ikakhulu ngoba kaningi asikho isizathu sokwenza kanjalo!
Yini engathuthukiswa nge yakho ikhadi lami lebhizinisi?
Faka isithombe sakho ekhadini lakho lebhizinisi. Lokhu kuzovumela abantu ukuthi bakhumbule ukuthi ubungubani!
U-Alex uthi kufanele ufake i Ukufumbathisa okulungile. Ngamanye amagama, ngabe kukhona okuthile ekhadini lakho ongahlinzeka ngakho okuzoholela ekutheni umuntu athathe isinyathelo? Isibonelo sakhe inombolo engu-1-800 enomyalezo orekhodwe ngaphambilini. Akungomuntu futhi kuphephile… futhi umuntu oyishayelayo angazuza kulo mlayezo.
Faka nomyalezo owenzelwe ngokwezifiso umcimbi owunikeze wona. Uma usemcimbini wokuxhumana nabantu, oda amanye amakhadi kuleyo micimbi. Uma ukhuluma emcimbini, faka umcimbi! Uma usengqungqutheleni… beka ingqungquthela. Ngu ngokwezifiso ikhadi kumcimbi, usanda kunikeza umamukeli ifayili le- i-billboard encane ukubamema ukuthi bathinte kanye nokuhlinzeka ngengxenye yegciwane. Lapho u-Alex ekhipha amakhadi angama-500, ubona ukuvakashelwa okungu-2,000 XNUMX kumasayithi akhe nezinombolo zocingo. Leyo yingxenye enhle yegciwane!
Sengizothenga elinye iqoqo lamakhadi ebhizinisi lami futhi ngizofaka lawa macebiso. Isithombe sami sizongezwa (bubula!), Ngizofaka isixhumanisi sokulanda mahhala ngezeluleko ezithile namathiphu, futhi ngizoqopha kusengaphambili umlayezo ongcono kuGoogle Voice ngeminye imibuzo ebuzwa njalo mayelana ibhizinisi.
Ngazise uma unentshisekelo ochungechungeni lwebhizinisi engilubhalisela. Kuyabiza kancane, kepha uma ngithola inkontileka eyodwa ekunikezeni ngamakhadi ebhizinisi, izokhokhela lonke uchungechunge lwebhizinisi… futhi ngisevidiyo yokuqala nje. Ngithole ukuncoma okuningi kumakhadi ami wakamuva - kepha angikwazi ukusho ukuthi sebephume negciwane noma bangitholele ibhizinisi!
Tags: isibikezelo sokusetshenziswa kwezikhangisoUkusetshenziswa kwemali ku-facebookUkusetshenziswa kwemali yesikhangiso se-facebookUkusetshenziswa kwemali kwe-google kanye nezikhangisoumklami we-graphicAmapulatifomuifu lokuthengisa labasebenziukusetshenziswa kwezikhangiso zomphakathiUkusetshenziswa kwezikhangiso ku-twitter
Sep 10, 2009 ku-12: 31 AM
U-Alex Mandossian uyindoda! Linda uze ubuke ividiyo enika imininingwane ngesinyathelo ngesinyathelo ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-teleseminar. Abantu abaningi bakuthola kabi !!
Sep 10, 2009 ku-2: 12 AM
Ngifisa sengathi ngingasho umthombo wami, uDoug, kepha angikhumbuli ukuthi ngikufunde kuphi lokhu, esikhathini esithile esidlule: amakhadi ebhizinisi anesithombe sakho mancane amathuba okuthi aphonswe kudoti. Mhlawumbe omunye umuntu angakuqinisekisa lokhu.
Sep 10, 2009 ku-3: 34 AM
Ngeke ngikungabaze, Bob! Futhi ezinye izinkampani zichitha kancane kumakhadi ebhizinisi - zingaboni inani lazo uma zisetshenziswe ngokuphelele.
Sep 10, 2009 ku-3: 48 AM
Khumbula nje, akukhona ukwenza ikhadi lakho likhumbuleke. Imayelana nokuthola amathuba OKUTHATHA ISENZO lapho efika ekhaya noma ebuyela ehhovisi.
Sep 10, 2009 ngo-2: 09 PM
Kushiwo kahle, Patric!
Sep 10, 2009 ku-2: 18 AM
Kufanele usebenzise indiza yephepha njengendalo yelogo yakho kumakhadi akho. Mhlawumbe ikhadi lakho lonke malibe yilogo yakho ekubukeni kokuqala kodwa uma livela linemininingwane oyisho kokuthunyelwe ngenhla. Kungaba nzima ukukwenza kepha kuzoba kuhle futhi kukhunjulwe impela.
Sep 10, 2009 ku-3: 33 AM
Lowo ngumqondo omuhle, onobuhle! Ngingahle ngibheke ukwenza okuthile ngalo mbono ngokuzayo. Ngiyabonga!
Sep 10, 2009 ku-3: 40 AM
UDoug hlola i-avatar yami engaziwa, uhlobo lokuhambisana nebhulogi 🙂 Ngangena ngemvume nge-Twitter futhi ngine-avatar ye-Twitter okuyisithombe sami engizibuza ukuthi kungani ingaveli
@bucreative - izithombe ziyakhishwa ku-gravatar.com - thola eyodwa! 🙂
Mar 1, 2011 ku-3: 44 PM
Ukuzizwa okuphelele ekuqaleni kubukeka njengokuhlangana okungapheli. Ngicabanga ukuthi umsebenzi omningi ohlangothini lwe-typography kanye nesizinda esibukhali ngokwengeziwe sizosiza. Awukwazi ukusho ukuthi ushintshe ini kepha kepha ubuza umbono nje.